အဆောင် ၂၆ အခန်း ၂၆
ဒေါက်ဒေါက်ဒေါက် မမြည်တဲ့ တံခါးကနေ
ရက်ရာဇာရဲ့ အသက်ရှူသံကို တစ်ယောက်တစ်လှည့်ဖေးမ
ငါတို့ လမ်းက ခရီးဆန်းမဟုတ်လို့
ခလုတ်တော့ မကင်းဘူး …..။
သူများကို ခြေထိုးချင်တဲ့ ခေတ်။
စက္ကူစုတ်ကို ထမင်းလို ထုတ်စားသူတွေရဲ့
အရေခွံ့လဲမှုနဲ့ ဝေးဝေးကို သွားမယ်။
ငါ့ရင်မှာ ခိုပြီး ရဲရဲကြီး ၀ဲသွားလိုက်ကြစို့။
သူရဲ့ မဒမ် ပိုကာဝိုင်းသွားတယ်
အရံ လူမငယ်တွေနဲ့ သီချင်းတွေ ဆိုကြ
တစ်ညနဲ့ နောက် တစ်ည
ခန္ဓာဗေဒ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ တူတူလာ
စက္ကူတွေစားပြီး မြေကြီးထဲသွားကြတယ် …..
စကားလုံးများများ၊ စာမျက်နှာများများ၊ လိုင်းများများရေးလို့ ခင်ဗျားကဗျာရှည်သွားပြီထင်နေလား။ ကဗျာရှည်ရှည်ရေးဖို့ လျှာရှည်ရှည် စကားရှည်ရှည်၊ အလုပ်ရှည်ရှည်၊ အရပ်ရှည်ရှည်၊ အတွေးရှည်ရှည်၊ တဆိတ် ခင်ဗျား လက်တန်ခြေတန်တွေ ရှည်လွန်းတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကြားဖြတ်ပြောချင်တာက ခင်ဗျာ နဲ့ ကျုပ် ကိစ္စ။ ခင်ဗျားဘယ်သူလည်းဆိုတဲ့ ကိစ္စ။ ကျုပ်ဘက်ကကြည့်ရင် ခင်ဗျားက ခင်ဗျား ကျုပ်က ကျုပ်၊ ကျုပ်ဘက်က မကြည့်ဘဲ ခင်ဗျားဘက်ကကြည့်တော့ ခင်ဗျားက ကျုပ် ကျုပ်ကခင်ဗျား၊ ကျုပ်နဲ့ ခင်ဗျားကြားမှာ ကဗျာရှိရင် ကျုပ် ကဗျာ ခင်ဗျား ခင်ဗျား ကဗျာ ကျုပ် ကျုပ် နဲ့ ခင်ဗျားက ခင်ဗျား ကဗျာက ကျုပ် ကျုပ် နဲ့ ခင်ဗျားက ကျုပ်က ကဗျာက ခင်ဗျား ကဗျာနဲ့ ခင်ဗျားက ခင်ဗျား ကျုပ်က ကျုပ် ကျုပ်နဲ့ ကဗျာက ခင်ဗျား ခင်းဗျားက ကျုပ်၊ ဒီလိုဆိုရင်လည်း ရှုပ်နေတဲ့ ကိစ္စကို ဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်။ ဆက်ပြီးတော့ ပြောမယ် ကဗျာရှည်၊ ကဗျာတို ကိစ္စဆက်မယ်။ “ ကဗျာ တို/ရှည် တစ်ပွဲလောက် ” “ ဟင်းနဲ့လား သကြားနဲ့လား ” “ အချို လျော့လိုက်တာပေါ့ဗျာ ” ဒီစာမျက်နှာကျော် ဟိုစာမျက်နှာရောက်ရင် ဒီစာမျက်နှာက ဟိုစာမျက်နှာဖြစ်ပြီး ဟိုစာမျက်နှာက ဒီစာမျက်နှာဖြစ်သွားမယ် ဒီစကားမျက်နှာပေါ်က ဒီစာကြောင်းတွေ နဲ့ အကြောင်းအရာတွေက ဟိုစာမျက်နှာပေါ် ရောက်မလာဘဲ ဟိုစာမျက်နှာဖြစ်သွားတဲ့ ဒီစာမျက်နှာပေါ်မှာ ဒီအကြောင်းတွေက ဟိုအကြောင်း အဖြစ်နဲ့ ကျန်ခဲ့ပြီး ဟိုစာမျက်နှာက ဒီစာမျက်နှာဖြစ်ပြီး ဒီအကြောင်းအရာဆိုတဲ့ ဟိုအကြောင်းအရာ အသစ်တွေကို မြင်ရပြီး ဟိုအကြောင်းအရာဖြစ်မယ့် ဒီအကြောင်းအရာက အဟောင်း ဖြစ်သွားမယ်။ အမြင်ရှည်ရှည်မြင်ကြ။ ဒါလိုအပ်ချက် အရည်အချင်းလား လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ငါ မထောက်ခံဘူး မိတ်ဆွေ။ အကြည့်တွေ ရှည်ရှည်။ အသံတွေရှည်ရှည်။ သတိရှည်ရှည်။ အိပ်မက်ရှည်ရှည်ထဲ။ ဆံပင်ရှည်ရှည်၊ လက်သည်းရှည်ရှည်၊ အရပ်ရှည်ရှည်၊ လက်တန်သွယ်သွယ် ရှည်ရှည်၊ ငါမမြင်ဘူးတဲ့ ကောင်းမလေး အလှရှည်ရှည်၊ သူမ လမ်းမရှည်ရှည်ပေါ်က တိုက်ခန်းရှည်ရှည်ထဲ ထိုင်ခုံရှည်ရှည်ပေါ်မှာ စန္ဒရား မည်းမည်းရှည်ရှည်ကြီးပေါ်က ခလုတ် ဖြူဖြူ မဲမဲ တိုတို ရှည်ရှည်လေးတွေပေါ် လက်ချောင်း ရှည်ရှည် ဖြူဖြူ လက်သည်းရှည်ရှည် မဲမဲလေးတွေနဲ့ သီချင်းရှည်ရှည် တစ်ပုဒ်ကို အလွမ်းရှည်ရှည်လွမ်းလိုက် အသံရှည်ရှည်ဆွဲလိုက်။ ဒီလိုနဲ့ ဆံပင် မည်းမည်းရှည်ရှည်တွေ ရှည်ရှည်လျားလျား လွန့်လူး …. ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ….
Author: ဗလာ Posted under: ကဗျာ, မိကြယ်စင်
ရာဇသံမပေးဘဲ ဟိုးလေးတကျော်ကျော် …
မခေါ်ဘဲလာမိသူက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြိုးကွင်းချ
လွတ်နေတဲ့ နံရိုးကြား သစ်သားပြားတောင် အစားထိုးမထားဘူး
။ထား။ဒါဆိုလည်း ထား။ ဟိုဟာဆိုလည်း ထား။
သီချင်းထဲက ထား။ မဟုတ်။ ဘူး။ ထား။ မရှိရှိတာချ
ယူ ထား ။
ပြီး ရင် သွား။
ရှူဆေးဘူးနဲ့ ကိုယ့်အသက်ကို ကိုယ်ပြန်ဖို့ မလုံလောက်ပါ။
ဟိုးတစ်ခေါက်က တစ်ယောက်တည်း ကြိုးကျစ်စီမံရ။
ပြီးမှ ဘယ်သူမှ မမြင်ရလိုက်တဲ့ သာဓကတွေ ခင်း
ကျင်း ပြ သ။
ချည်တုပ်ဖို့၊ ဆွဲချဖို့။ ငါ့အနားမရှိတော့ ငါ့နားမရှိတော့ ငါ အနားမရှိတော့ ငါ နားမရှိတော့။
မရှိတော့။ မသိတော့။ မ …. တော့။ …. တော့။ တော့။ …..။
တစ်စုံ .. တစ်ရာ တစ်စုံတစ်ရာမှ မသေချာဘူး။
သွားရအောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ အဖော်ညှိ ။
ထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ထပ် ပြီး အလိုက်သိသိသိ ပေးမိပြန်ပြီ။
“ဖြစ်ရပ်မှန် မျဉ်းစောင်း အမှန်ဖြစ်ရပ်”
မှတ်မှတ်ရရ ရင်ဘတ်က ဘယ်သူမှ ခိုးမရနိုင်ဘူး။
ကဲ … ဘာတွေဆက်လက်ရှင်သန် ….။
အရုပ် ရပ်ဝန်း ရှေ့ကြောင်းရာဇ၀င်
ဒီညက ၅ မိနစ်စာ နောက်ပြီး ကျုပ်က ၅ မိနစ်စာ။ ဒီထက်ပိုပြီး စကားလုံး၊ မြစ်ရေ၊ ရာသီဥတု၊ သံယောဇဉ် ရှားပါး။ မြို့ပြကပြောသံတွေ နားကြားမှား။ ဒီလိုနဲ့ မနေ့က မိန်းမ ခါးခါး တစ်ချို့ ခါး။ လက်တစ်ဖက်နဲ့ ခိုးရွှေ့ကြည့်တဲ့ည။ သည်ဖက်ကမ်းမှာလည်း ဂြိုလ်ခုံအလွတ်တစ်ခုရဲ့ အမှား။ များ။ ငါ မမြင်တဲ့ ကြယ် (အခွင့်မရှိပါသဖြင့်) မထိုက်တန်ပါသဖြင့်… စသည်ဖြင့်၊ မမြင်ရသောကြယ်။ ထား ။ သင့်ရာအကြောင်းပြဖြင့် ၀င်ခွင့်လက်မှတ်ရှိသည်။ ရွာစရာ တစ်ခြမ်းတစ်ပိုင်း ဖြင့် လဲလှယ်ရန်အလို့ငှာ ကြော်ငြာထားပါ။ ကျွန်တော့မှာ မွေးရာပါမျက်နှာ မရှိဘူး။ သူ မနမ်းခဲ့တဲ့ပါး .. သူမ မလွမ်း .. သူ လွမ်းရုံသာ။ လက်နှစ်ဖက်၊ ခြေနှစ်ချောင်း ဘီးလူးခေါင်းမစောင်းချင်။
ရှေ့ရာဇ၀င် အနာဂါတ်လက်တစ်လှမ်း။ ကျွန်တော့မျက်ရည် အစစ်တွေ ရှိနေကြောင်း ဘာတွေနဲ့ ပြသနိုင်မလဲ။ သတ္တုဓါတ်နဲ့ စီးဖြန်းထားတဲ့ တံတား ငါတို့ ကြား၊အနား မှာ မရှိစေ၊ မရှိလေကောင်းလေ။ အပြုံးအတုရဲ့ နောက်ကွယ် ရှိုက်ချက် ကျွန်တော့ကိုတကယ် ဘယ်သူမှ မမြင်ကြရဘူး။ အမှန်လွန်သဘောတရားနဲ့ မျက်ကန်းဖြစ် မဖြစ် ကိုယ့်တိုင်ထွင်းခြစ်ရမယ်ဆိုပြန်တော့ …..။ ကြိုးထိုးထားတဲ့ဘ၀ကို ကျွန်တော်မှန်းတယ်။ ဘယ်သူ့ မျက်နှာနဲ့ ဖြစ်ရပြန်ပြီလဲ။ လူတစ်လုံး သူတစ်လုံး လူ မဟုတ်တဲ့ သူ စက္ကူဆုတ်တွေကို မှိုင်းတိုက်လိုက်ချင်ရဲ့။ ၀ါယာကြိုးထဲက ၅၀ တန်ချိုချဉ် ….. လှေကားလက်ရမ်းပေါ်က ၅၀ တန်ချိုချဉ် ကူသူမဲ့ ကယ်သူမဲ့။ အစစ် ဖြစ်ခြင်း မဖြစ်ခြင်း။ တူလွန်းပါတယ် မိတ်ဆွေ သင်နဲ့ ကျုပ် ကွဲလွဲပုံခြင်း။ ကျုပ်အလွဲက ငါ့အနားမနေဘူး။ နားကပ်တစ်ရံ၊ ပန်းသီပုပ်၊ ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက် လက်နက်ကြီး။ “မရမ်းသီး” စားဖူးလား “မိတ်ဆွေ”။ နှစ်နှစ်လိုလို မျက်လုံးနဲ့ ပြုံး။ ကာတွန်းနဲ့ ရေးတဲ့ကဗျာ အသားစအနက်ကြီးတွေ အတုတွေ၊ နံပါတ်ကြားမှာ ၀ှက်ထားတဲ့ဓါး …… ၂၆ ချက်ဆိုတာ သွေးမထွက်တဲ့ စိတ်ကြိုက်ဒဏ်ရာ။ အနာ။ တရ။ မေ့မေ့မောမော စက္ကူစတွေဖွာဟ၊ သူပျိုးတဲ့ပန်း ခရမ်းဖြစ်စေ၊ ပန်းခရမ်းဖြစ်စေ။ ၀တ်လစ်စလစ်ညဆို မျက်နှာ မရှိတဲ့ ငနဲရဲ့ ဘ၀ အေးခဲတမ်းတ။ အလိုက်တသိလည်း ဖြိုပေးပါရဲ့။ ဒါ … ။ ကြယ်။ ခရမ်းနုရောင်ဆိုတာ သွေးပျက်ခယ။ သံစဉ်ဆုံးပျောက်။ ဒီလိုနဲ့ ….. အံဆွဲထဲက ပထမဆိုတဲ့ ပထမ။ သူ ၅၊ ငါ မိနစ်၊ တစ်ညတစ်ခန်းစာ ၅ မိနစ်ထဲ …..။
စကားမဲ့ နေ့နေ့ညည အစပြုပုံများ
မနေ့က မနေ့က မဟုတ်တဲ့ နေ့က
ရင်ထဲ “ဟာ” …
ခနဲ … ငါ
လေ သွေးတွေ တတောက်တောက်
အသက်တွေ ပြင်းပြင်းရှူပြီး … ဟေ့
တစ်နေ့တစ်ခါ တွားတွားသွားတဲ့ မိန်းမ
ကဲ ဘာတွေ ပြန်စပြီးပြီးလဲလေ …. ။
လှမ်းပြီးခေါ်ရုံနဲ့ ငါကိုယ်ငါ မေ့ချင်သလိုလို ဖြစ်ပြတဲ့ အခါ
ငါ့ဘ၀က ကြယ်တွေလည်း ခပ်ဟဟ မပွင့်ဘူး။
ငါ့ရေသောက်မြစ်မှာ ဓါးထစ်ထားတာ ဘယ်သူများလည်း။
ဒုက္ခဆိုတဲ့ ထော့ကျိုးငနဲ ခရီးတွေကို
အမြဲ အမြဲ သွားတယ်တဲ့လား။
ငါ့ ဘ ၀ က တစ်ခါနှစ်ခါ သုံးလေးခါ
ပြာပြာပြာ ခါခါ ကျချတယ်တဲ့ ဗျာ။
ခုနှစ်ထပ်ဖွင့်ထားတဲ့ ကြာပွင့်မှာ နင်မတင့်တယ်ဘူး။
နင့်အဆင့်နဲ့ နင် ကောင်းကင်မှာနေ
ငါစေရင်လည်း နင်မကြွေလာပါဘူး ….. ။
ကြာသပတေးနံ မပါတဲ့ ကြာသပတေးမ
ငါ ခဏက ဟာကနဲ ကွာကျသွားပုံများ
မတွေ့ရက် မမြင်ရက် နင်သိပ်ရက်စက်တယ်တဲ့ ။
အရပ်ရပ်မှာ ပူဇော်ပသ တွေးလို့ မရစေနဲ့။
ခူးပြီး ခပ်ပြီးသားမှာ ငါ့ထမင်းဟင်းတွေ
….. ….. ….. ….. ….. ….. ။
ပြီးပါပြီ ဆိုမှတော့ …..
လုံလုံ လောက်လောက် ဝေး ..... ….. ….. … ..။
မှားပြီးရင် ခါး … တဟားဟားရယ်
တစ်ရက်ခစား အသွားပျောက် စာချွန်နဲ့
သွားတုတွေချွတ် .. ဟုတ်ပါတယ်
အဆွယ်ဆိုတဲ့ နိယာမနဲ့ နင်က ဂုတ်ချိုးစားခဲ့တာ ။
ငါလေ အပြစ်တွေ လျှော်ထုတ်
“မိကြယ်စင်” သာ … ဘ၀ရဲ့
ပန်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်စေ ရှိစေ တည်စေ ချင်ရဲ့။
နေမြင်ရင် ရေစွတ် … ငါ့ ထွက်လုနီး
ခန်းခြောက်မှုနဲ့ ….. ….. ….. ….. …..။
“မိကြယ်စင်” ရေ …. …..
နင့် နံနက်ခင်းမရောက်ခင် အသက်စွန့် ကြိုးပမ်း
ရာဇ၀င်တင်မဲ့ နေ့ပဲဆိုပါတော့ … .. ……. ။
ဟူး ကနဲ သက်မချ ….. ပြီး … သက်ထီးချ။
ထီးချ … ဦးထုပ်ချ ..
ကဲဆို .. ခဏခဏ
သွားဆိုလည်း သွားပါ့မယ် “မိကြယ်စင်” ရယ်
မရောက်ခင် ပေါက်တဲ့ ဖိနပ်
ငါ့ တစ်သက်နဲ့ ငါ့ တစ်ကိုယ်ပဲ
၀ဲ ….. ၀ဲ ….. လည် ….. လည်
တစ်ခါနဲ့ တစ်ခါ မပြောဖူး ဖြစ်ခဲ့တဲ့စကား
တစ်ဟားဟား ရယ်သွမ်းဖြစ်တဲ့ ည
ဟ တ တ နဲ့
တစ်လွှာပြီး တစ်လွှာ ….
ဘ၀ ရယ် … ဟာ ဆိုပြီး မဟာပါနဲ့ ကွယ်
“မိကြယ်စင်” ….. …..
အခန်း ဘယ်နှစ်ရွက်စာ လွင့်ကျော်ဖြတ်ရွေ့
အဲဒါ ….. …..
နေ့ဆိုလည်း နေ့ပေါ့ ။
မပြောဝံ့ ….. မနာသာ
နင် ဆိုတာ ငါ ခါးရာလမ်း …..။
ခရမ်းတော ပန်းမှာ နင်မပွင့်လည်း
လမ်းနဲ့ ကမ်းမှာ နှင်းတလွင့်လွင့် ဟောဆိုရင် ပွင့်
ဒီနာမည်ကို ထပ်မခေါ်ဘဲ ငါရေတစ်ခွက်လောက်
ဒါလည်း အမော မပြေခဲ့ပါဘူးလေ။
ငါက ….. ….. ….. …..
ဟိုးဟိုး ရှေ့ရှေးတုန်းက ငါပါပဲလေ ….. ။
ကျွန်တော်၏ ကွဲလွဲနေသော ကျွန်တော်များ၏ အတွေးဖြင့် ကွဲလွဲနေသာ အတွေးများဖြင့်
``ကျွန်တော်၏ ကွဲလွဲနေသော ကျွန်တော်များ၏ အတွေးဖြင့် ကွဲလွဲနေသာ အတွေးများဖြင့်´´
ဘ၀ နဲ့ ပက်သက်ရာ ပက်သက်ကြောင်း
တောထွက်သွားသော စကားစုများ နှင့် ကျွန်တော်
နှင့် စကားမပြောဖြစ်သော ကျွန်တော့စကားစုများ နှင့်
ဒီလိုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံး နှင့် ဝေးဝေးလွင့်လွင့် ....
ရောက်ပြီးမှ မသွားဖြစ်သော တစ်ရံတစ်ခါနှင့်
ကြယ်ကြွေရာ အရပ်မျက်နှာ၌ မျက်ဝန်းဖြူစိုက်
လူမ၊ သူမ ညွှန်ရာအရပ် ရေဖြစ်စေ လေဖြစ်စေ
ဘာဆိုဘာ ညာဆိုညာ ဖြစ်စေ
နောက်တစ်ကြောင်း ချရေး ဒါကဗျာ ဖြစ်စေ။
ပြီးလား .. ဒါဖြစ်ပြီးပြီလား ဒါမှမဟုတ် ဒါမှမဟုတ် ဖြစ်ပြီလား
ကဗျာ ဖြစ်လား ... က ကြီး တစ်လုံး နဲ့ ဗျာ များ
မဟုတ်ဘူး ၃၃ လုံး သောဂြိုလ်ကြီးများထဲ
ငါ ပတ်လှည့် ရောက်ဝင် မမှန်ဘူး သွေးထွက်အောင်မှားတယ်
မနေ့ညအထိ ငါအသက်ရှူ မှူမမှန်ပြန်ဘူး
အသက်ရှူသံတွေ ထွက်တစ်ချက် ၀င်တစ်ချက်
တစ်ခါ တစ်ခါ နှစ်ချက် .. တစ်ခါ တစ်ခြား ပြတ်တောက်
နောက်တစ်နေ့ နေ့ထွက်တော့ ... ငါ့မျက်နှာက ငါမဟုတ်တော့ဘူးလို့ ငါ့ကိုပြော
ကြိုးတစ်ချောင်း နဲ့ မနေ့က (အင်း ထင်ရတာပဲ) ပြတ်သွားတဲ့ အင်းထင်ရတာပဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ အင်း .. ထင်ရတာပဲ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်ကျော်ရဲ့ မနေ့က ကြာသပတေးမ
ငါ တစ်စက်စက် သွေးတွေကျ ခဲ့ရ
ကဲ နောက်တစ်ကြောင်းထပ် ရေး
ဒါ ငါ့ဘ၀ ဒါငါ့ဂီတ ဒါငါ့ ကဗျာ
ကဲ ... ဘာပြောကြဦးမလဲ ...
လူကြီးမင်း ခေါ်ဆိုသော ဖုန်းသည် တရုတ်ပြည်တွင်
လိုင်းမမိသောကြောင့် ခေါ်ဆို မရနိုင်ပါ
နေနှင်းစက် ခေါ်ဆိုသော ဖုန်းသည် တနင်္ဂနွေ နေ့ဖြစ်ပါ၍
မိတ်ဆွေ ... ခေါ်ဆိုသောဖုန်းသည် ကျွန်တော် မသိသောကြောင့်
သေချာ မပြောနိုင်ပါ ။
ထိုခဏသည် တယ်လီဖုန်းဖြစ်ပြီး စာတန်းဖြစ်ပြီး
အလွမ်းဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး ရာသီဥတု
ဒီနေ့ ပူတယ် သူငယ်တန်းဖတ်စာ ထီးယူလာပါ
ဟုတ်ကဲ့ ဒီနေရာမှာ နားမလည်နိုင်သော အရာ ပြီး။
(ကိုယ်) ။နှင့်။ (စိတ်) မကပ်သော (စိတ်) ။နှင့်။ (ကိုယ်) နှင့်
(ကိုယ်) ။နှင့်။ (စိတ်) မကပ်သော (စိတ်) ။နှင့်။ (ကိုယ်)
ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မမြင်ရဘူး .....
ရှိစေတော့ ငါကိုက ကြယ်နဲ့ ဝေးဝေး နေရတဲ့ကောင်
တစ်ဝက်တစ်ပျက် ငိုချင်းချလိုက်တယ် ...
မနေ့တစ်နေ့က အိပ်မက်တွေကို ရောင်းစားပစ်လိုက်တယ်တဲ့ ...
သူမတွေ ဘယ်နှစ်ည အိပ်မက်အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ကြမလဲ
ကဗျာဆိုတာ ရေးလို့ မရဘူးတဲ့
ဟုတ်ပါ့မလား ... ဟုတ်ပါတယ် ... မဟုတ်ပါဘူး .. ဟုတ်လို့လား
ကျွန်တော် သိပ်နားမလည်ဘဲ နဲ့ အိပ်မက်တွေ ကို အရောင်းအ၀ယ်လုပ်တယ်
ထမင်းတစ်နပ်အတွက်လည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူး ..
နောက်တော့ ည တစ်ညကို ၀ယ်ဖြစ်လိုဝယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါ
နစ်လိုက်ပေါ်လိုက် မြုပ်လိုက် မျောလိုက်
မသေချာဘူး ကကြီး ခခွေး ဂငယ် ဃကြီး င
အင်း ယပင့် ယရစ် ၀ဆွဲ ဟထိုး အသတ်
တစ်လုံး တစ်လုံး လှိုင်းလုံးတွေ ပုတ်ချ
အသံတွေ အလုံးလုံး အထွေးထွေးနဲ့
ကျွန်တော် ညကြီး ကို ပစ်ချလိုက် ပြန်ကောက်လိုက်
ဆုတောင်း ကောင်း၏ မကောင်း၏
ကျွန်တော် တစ်နေ့ကို ဘယ်နှစ်ခါအသက်ရှူမိသလဲ
တစ်နေ့တစ်ခြား အသံတွေ ပိုပိုကြားလာတယ်
ကျွန်တော်အသံတွေ တုန်ရီနေတာပေါ့ မေမေ
ဘယ်အချိန်ရောက်ရောက် တံခါးမခေါက်ဘဲ သူမရောက်ရောက်လာတယ်။
သေသာသေလိုက်ချင်တယ်ကွာ ဘောလုံးပွဲနဲ့ အိပ်မက်နဲ့က လက်ယျာရစ်လှည့်ပြီး ပြန်ထွက်သွားပြန်တယ်။
တကယ်တော့ လူဆိုတာ အသံတွေနဲ့ အမှားအမှန် မရေးရမနေနိုင်တဲ့သူတွေ ပါပဲ လေ။
ထားပါတော့ ကျွန်တော်လည်း တစ်နေ့ ကို မျက်နှာ ဘယ်နှစ်ကြိမ် သစ်နေလဲ။ ဒီတိုင်းပါပဲလေ။ အသစ်ပြန်မဖြစ်ဘူး။
ဟိုးအဝေးကြီးမှာ ကျွန်တော့ မီးရထား လူတွေ လည်း မပါကြဘူး။ ဒါပါပဲလေ ။
စကားသားတွေ ကုန်ရီ တုန်ဖွ ... အမေ ... သား ရင်ပေါ်မှာ မီးခိုးနံ့တွေ နဲ့ လှည်းတန်းဈေးလေးကို သတိရတယ်။
မာစီးဒီးကားနဲ့ စက္ကူ မှိုနဲ့တွေကိုလည်း ကြည်ဖြူတယ်။ ထမင်းရည် အတူသောက်ပြီး မနပ်မှန်တဲ့ ဟင်းတွေကိုလည်း မြတ်နိုးတယ်။ သူလိုမျိုး ဘယ်မှာရှိလည်း။
သူ့အင်္ကျီကို ဖြဲ သူ့ သွေးကို စုတ် သူ့အသက်ကို နှုတ်တော့ ... မေမေရယ် သူလည်း မောလို့ နာလို့ နည်းနည်း နေရာရွှေ့တာပါ။
ကလိုရိုဖောင်းနံရတယ်။ အဲဒီနေရာကို ပြန်ရှာကြည့်တော့ ခြေနှစ်ချောင်းနဲ့ လူစွမ်းကောင်းတွေ လက်နက်ငယ်လေးတွေကိုင်လို့။
မိမဲ့ ဖမဲ့ အဲဒီ လက်နက်က ဘယ် နတ်မင်းက ဖန်ဆင်းလိုက်သလဲ။ ကျွန်တော် စကားမပြောဘူး မေမေ။ ဒီလူက လူမဟုတ်ဘူး။
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက သူမ သိပ်နုပျိုတယ်။ သူမ ကွေ့ကောက်နေတဲ့ ဆံနွယ်လေးတွေ တစ်ဖြေးဖြေး လျော့ပါး။
ဟိုးရှေးရှေးက သူမ ကောက်ကြောင်းထင်ရှားတဲ့ အရာတွေ တအိအိပြိုကြ။ မဟုတ်ဘူး ဖြိုချခံရတယ်။ သူမ နည်းနည်း လူးလွန့်ခွင့်ပြုပါ။
သူမ ရဲ့ စိုပြေမှု အခု ... ။ မေမေ သူမ တစ်ခါတစ်လေ ညဉ်းညူပါစေ။
သူတို့က ကျွန်တော်တို့က ကိုယ့်အနာမှ နာတယ် ထင်တတ်ကြတာလေ။ ဒါဆိုလည်း မကြာမှီလာမည်မျှော်ပေါ့။
သူမရင်တုန်ပန်းတုန်နဲ့ ခါခါ ချလိုက်တဲ့ အခါမှာ ... ။ မေမေ အပြစ်မဲ့ သူတွေနဲ့ အပြစ်နဲ့ သူတွေ ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါဘူးလေ။
မမှန်မကန်ဆိုတဲ့ စကားရပ်ကို အထပ်ထပ်ရွတ်ဆို သူ့လက်ထဲမှာ ... ။
မေမေရေ ...... ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပါပဲ ... ။
ဘယ်လိုနေ့ရက်ရောက်ရင် ဘယ်လို ကခုန်ရမယ် ဆိုတာလောက်တော့ ခရီးပေါက်နေပါပြီ။ လွတ်လပ်မှုတွေ ။ လစ်လပ်မှုတွေ။ ခရီးပေါက်နေပါပြီ။
မေမေရေ သစ်သစ် မသစ်သစ် သားတို့ မျက်နှာသစ်ကြည့်ကြစို့။
ဒီနေ့ကို လွန်ပြီးရင် နောက်ထပ် ဒီနေ့
ဖျားဖျားနာနာ ဆိုလို့ သူမ မရှိတဲ့ နေ့ ဖြစ်မယ်
သူမ ခြေဖျားနားမှ ကပ်ပါးဘ၀ ဖြစ်ရစေ။
( လို တိုင်း တ မ ရ နိုင် )
အ ရာ ရာ ခဏ ဖြစ် စေ
လှမ်းပြီးခေါ်ရုံနဲ့ ငါကိုယ်ငါ မေ့ချင်သလိုလို ဖြစ်ပြ...
ကျွန်တော်၏ ကွဲလွဲနေသော ကျွန်တော်များ၏ အတွေးဖြင့် က...
(ကိုယ်) ။နှင့်။ (စိတ်) မကပ်သော (စိတ်) ။နှင့်။ (ကို...